Dibana neefowuni zebluetooth zeSamsung zeBluetooth | Iindaba zeGajethi
Dibana neefowuni zebluetooth zeSamsung zeBluetooth
URafa Rodríguez Ballesteros | | Izixhobo, Umfanekiso kunye nesandi, Imiboniso
BesinoFebruwari 20 ephawulwe kwikhalenda ixesha elide. Namhlanje ekugqibeleni ibiyimini kaSamsung, kwaye ukulinda bekufanelekile. Ukongeza ekugqibeleni ukudibana ne-protagonist yokwenyani yeenguqulelo ezahlukeneyo ezikhoyo, i-Samsung Galaxy S10, ibikhona ezinye izixhobo zenkampani eziphakamise nolindelo. Kule veki bekukho nokuthetha okuninzi malunga Iifowuni ezintsha zeSamsung. Kodwa akuqinisekanga ngokupheleleyo ukuba sizakuba nethuba lokudibana nabo ngale njikalanga.
Emva kwezinto ezininzi ezothusayo eziziswe yile fomathi yomsitho mtsha, bekukho nendawo yoku iGlobal Buds entsha isuka kwi-Samsung, ii-headphone ezikulungeleyo ekugqibeleni ukuma kwii-AirPod ze-Apple. Ngaphandle kwezakhiwo kunye nokwazi ukuba banezibonelelo ngaphezulu kwayo nayiphi na enye imodeli, beze kunikezela ngenye indlela ebalulekileyo kwicandelo.
1 Iindaba ezivezwe yiGlass Buds
2 Izinto zokugqibela kunye noyilo
3 IGlobal Buds yeyona imbangi iphambili kwii-AirPods
Iindaba ezivezwe yiGlass Buds
Ii-headphone ze-Samsung zeBuds Buds ekugqibeleni zihambisa Iindaba ezinomdla kwicandelo, kwaye kwakumalunga nexesha. Babengabokuqala ukufika kulo nyaka kwaye ngenxa yeso sizathu, kwaye ngenxa yokuba iyiSamsung, baya kuba sisihloko sazo zonke izibane. Injongo kukwenza umohluko kukhetho olukhoyo ngoku kwintengiso. Sibona indlela ukubheja kweSamsung kwizinto ezinqabileyo, kwaye zibonisa ngezibakala ukuba kusekho indawo yako. Ilungele i-Samsung.
Ayisiyonto intsha, kwaye yinto esele ikhona kwiimodeli ezininzi. IGalaxy Buds inenguqulelo yamvanje ye- Uqhagamshelo lweBluetooth 5.0.Umgangatho wokuhambelana phakathi kwezixhobo ezenza ukuba unxibelelwano luzinze kwaye luqhubeke ngalo lonke ixesha. Isamsung ikhetha ukuxhobisa ii-headphone zayo ezintsha nge inqanaba lozinzo kunxibelelwano olubonelela ngamava omsebenzisi amahle kunokwenzeka. Iziphumo zixhasa olu nxibelelaniso, kwaye inkampani yaseKorea iyayiqhelanisa nemodeli yayo entsha.
La Ukushaja ngaphandle kwamacingo Olunye lweempawu ezicociweyo kwezi veki. Amanqaku amahle ngakumbi kule gadjet ekudala ilindelwe esiyithandayo. Ukongeza, Emva kokuqinisekisa ukutshaja ngaphandle kwamacingo kwi-Samsung Galaxy S10 esandula ukubakhona, baba liqabane elifanelekileyo. Ukutshaja ngaphandle kwamacingo kubenza enye igajethi yesizukulwana esilandelayo. Amagama angenazingcingo athenga ngakumbi.
Into entsha ngohlobo lokuphucula kukusebenza kwebhetri. Intloko entsha ye-Samsung ineefayile ze- I-58 mAh ibhetri bathembisa ntoni ukuya kuthi ga kwiiyure ezi-6 zokusetyenziswa gqolo. Okungaphezulu kokungaphambi kwayo. Ngapha koko, nge intlawulo enye yemizuzu eli-15 kwimeko yayo sinokuyonwabela iyure eyongezelelweyo nesiqingatha sokuzimela.
Sinefayile ye- chukumisa umphezulu ontununtunu esinokuthi sinxibelelane ngayo ukulawula umculo kunye neefowuni. Ngaphandle kwe Umncedisi welizwi weSamsung, iBixby, Ifakiwe ukuze ukonwabele ubukrelekrele bokuzenzela ngokusemandleni akho.
Izinto zokugqibela kunye noyilo
Isamsung ijolise ekunikezeleni ingxelo entsha yeefowuni ezingasebenzisi cingo ezingaphaya ngenxa yezizathu ezininzi. Ii-Icon Xs aziphumelelanga kwiziphumo ezilindelwe ngumvelisi. Kwaye umbono kukuba oku akwenzeki kwakhona. Ngaphandle kokuba zii-headphone ezikumgangatho ophantsi, intengiso yabo ayizange isuke emhlabeni kwaye yayimile phantse ukusungulwa kwayo.
Ukuzimela kwakuyinto enkulu ye-Achilles isithende se-Icon X. Nangona kunjalo Ukuhlala ngexesha kunye nokuphehlelelwa kwee-AirPod kwakungekho lula nako. Ngoku ngemodeli ehlaziyiweyo kwaye exhotyiswe ngcono kunaye nabani na, Isamsung ibeka onke amakhadi etafileni ngezona ntloko zigqibeleleyo kwintengiso ukuza kuthi ga ngoku.
Siqala malunga izinto ezikumgangatho ophezulukunye nezo Kugqityiwe ukuhlala ngoku kulindelweyo. Ukukhethwa kombala nako kububulumko. Umbala omhlophe ujongeka umhle kule modeli yentloko, kwaye ukubonakala kwetyala / kwitshaja kuyabetha kakhulu. Singazifumana ngombala omnyama, omhlophe kunye nomthubi.
Intloko ube nefomathi ebizwa ngaphakathi, Ezo ziphantse zangaphakathi ngaphakathi ezindlebeni. Ifomathi ethi uyayithanda okanye uyayithiya. "Icala elisezantsi" abahlala bekhona lelo inqanaba lolungelelwaniso olunzima kunzima ukufezekisa kwabanye. Ayibekwanga endlebeni ngendlela efanelekileyo Kungenzeka ukuba ukuqonda komgangatho esiwufumanayo akunanto yakwenza noko isixhobo esikwaziyo ukusenza.
Ukufezekisa ukulunga okugqibeleleyo kunye nokonwabela isandi abasinikelayo kubo bonke ubukhazikhazi, iSamsung ibandakanya ubungakanani obahlukileyo kathathu be "rubbers"eziya ngaphakathi endlebeni uqobo. Iinkcukacha ezinokwenza umahluko phakathi kwamava omsebenzisi obalaseleyo kunye nalawo aphakathi.
IGlobal Buds yeyona imbangi iphambili kwii-AirPods
Ngenxa yokungabikho kwezixhobo ezininzi nangaphezulu ze-3.5 Jack headphone port, ii-headphone ezingenazingcingo zikumaxesha akutshanje eyona gadjet "iyimfuneko". Ukuba nee-headphone ezingenazingcingo yinto esiyibeka phambili ngaphezulu kwezinye izinto ezininzi. Kwaye ukuba nathi asizidingi iintambo zokutshaja, kungcono kakhulu.
Iimodeli ze-smartphone zamva nje, iadaptha engathandekiyo iyimfuneko ukusebenzisa nayiphi na iseti yentloko. Ukuthathela ingqalelo inqanaba apho intengiso ikhula khona, iintambo ziphelelwa lixesha. Isamsung ijoyina lo mkhwa ngokubonelela ngemodeli esemgangathweni kunye neempawu ezaneleyo zokungabinangxaki.
IGlass Buds isuka uyilo olunonopheleyo oko kuhamba kakuhle ngokubona. Nangona sinokuthi zijongeka njengezinye izixhobo ezininzi. Kuyavunywa ukuba abanayo "inkuthazo" kuyo olona tshaba luphambili lokubetha, ii-AirPods. Ukunikezela ngemveliso eyahlukileyo neyinyani iya isiba nzima ngakumbi, kwaye iSamsung yenze iinzame zokuphumeza oku.
Ukujonga iinkcukacha zabo, uyilo kunye nayo yonke into abanokukwazi ukuyenza, singatsho ukuba Ii-AirPods azisabambi itrone. Ukuba bakhe banayo. Ukongeza, kubalulekile ukuba wazi ukuba amaxabiso ezi headphone zintsha aya kuba ngaphantsi kwento esinokuyilindela. Ixabiso layo liya kuba kwiidola ezili-130, ngezantsi kwale modeli yangoku yeendleko ze-AirPods.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Imiboniso » Dibana neefowuni zebluetooth zeSamsung zeBluetooth
Le yiGalaxy Fit, isongo esitsha somsebenzi weSamsung
Le iwotshi ebukeleyo eSamsung kwiGlass eSebenzayo